Malezia mahaliana " Journey-Assist - Fialam-boly, toetrandro, vola
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Малайзия
Fantaro an'i Malezia
Fampahalalana ankapobeny momba an'i Malezia
Kuala Lumpur Renivohitr'i malaysia
Amin'ny ankapobeny ny mpizahatany avy amin'ny firenena USSR taloha dia mahatsapa an'i Malezia ho firenena ivelany sy lafo vidy. Na izany aza, tena marina izany raha tsy amin'ny fitsangatsanganana fonosana. Amin'ny ankapobeny, ny vidiny mifandraika amin'ny fitsangatsanganana (hofan-trano, sakafo, fitaterana) eto amin'ity firenena ity dia ambany ihany (tsy dia ambony noho ny any Thailand). Azontsika atao ny manamarika manokana ny fitaterana Maleziana mora vidy. Manokana indrindra, ny sidina an'habakabaka ao Malezia amin'ny fiaramanidina Air Asia dia mitentina be mitovy amin'ny dia amin'ny bus. Ny vidiny mirary sy ny fitaterana tena tsara no tombony lehibe ho an'i Malezia amin'ny toerana fitsangatsanganana. Mpizahatany maro no mitsidika an'i Malezia, Singapore ary Thailand ao anatin'ny dia iray. Ireo firenena 3 ireo dia mifandray amin'ny lalamby lehibe.
Raha ny momba ny fety sy ny fiainana amin'ny alina dia lozika fa any amin'ny firenena silamo be indrindra, izay i Malezia, dia tsy misy be dia be ny clubclub, tsy toy ny, ohatra, i Thailand izay efa voalaza. Na izany aza, ny fialantsasatra malaza indrindra dia manana fialamboly toy izany. Mitranga ihany koa ny fivarotan-tena mikendry ny mpizahatany eto amin'ity firenena ity.
Finoana silamo ao Malaysia
Na dia ny finoana Silamo aza no fivavahana miely indrindra any Malezia, ny filaharana eto dia somary ambany kokoa noho ny any UAE sy ireo firenena Arabo hafa. Ka ny olona lavitra ny manompo an'i Allah dia afaka mahatsapa ho tony tanteraka eto amin'ity firenena ity, mitondra tena toy ny ao an-trano, raha mazava ho azy fa tsy mandika ny fenitra fototra amin'ny fahalalam-pomba izy ireo. Angamba ny olana tokana miandry ny mpizahatany, izay mahatonga ny finoana Silamo sy ny politikan'ny governemanta Maleziana, dia ny vidin'ny zava-pisotro misy alikaola, ary koa ny vokatra paraky. Na izany aza, any amin'ireo nosy misaraka any Tioman sy Langkawi, dia misy ny fitondrana varotra tsy andoavam-bola, noho izany ireto sokajy entana ireto dia azo vidiana eto amin'ny vidiny lafo tokoa.
Ireo toerana lehibe any Malezia izay mahaliana ny mpizahatany: ny nosy Penang, Langkawi, Tioman, Pangkor, Kalimantan, Rawa ary Perhentiani; Tanànan'ny Malaka sy renivohitr'i Kuala Lumpur; Tendrombohitra Cameron.
Ny mpizahatany avy ao amin'ny CIS dia tsy mila visa miditra an-tsambo any Malaysia raha mikasa ny hijanona amin'ity firenena ity izy ireo tsy mihoatra ny 30 andro. Amin`ity tranga ity, mila pasipaoro sy tapakila iray fotsiny ianao.
Toetr'andro any Malaysia
Malaysia dia eo akaikin'ny ekoatera. Noho io antony io, na inona na inona vanim-potoana, manjaka eto ny toetrandro mando sy malefaka. Ny mari-pana isan-taona dia +27. Ny rotsakorana isan-taona dia 2 mm. Io no mangatsiatsiaka indrindra eto amin'ny Novambra, Desambra ary Janoary, na izany aza, na dia ao anatin'ireny volana ireny aza dia matetika dia mahatratra +500 ny mari-pana. Saingy any an-tendrombohitr'i Malezia dia mbola misy ny hatsiaka. Noho izany, eo akaikin'ny tendrombohitra avo indrindra eto amin'ity firenena ity, ny Tendrombohitra Kinabalu, dia midina hatrany amin'ny +26 ny mari-pana indraindray. Ny volana fahavaratra dia sarotra be eto: ny mari-pana hatramin'ny +10 dia miaraka amin'ny hamandoana avo. Noho io antony io dia tsy tokony hatao ny mitsidika an'i Malezia amin'ny fahavaratra ho an'ireo zokiolona sy ireo izay voan'ny aretim-po mafy.
Ny oram-panala eto amin'ity firenena ity dia mitranga mandritra ny taona. Ny ankamaroany dia tena maharitra fotoana fohy. Amin'ny lafiny insular, ny toetrandro dia tsy dia samy hafa be amin'ny an'ny peninsular. Ny tandrefan'i Malezia dia miharihary amin'ny mason-drivotra kontinanta, fa ny atsinanana kosa misedra rivotra rivotra.
Weather in Malaysia an-tserasera
Widget ifandraisana. Safidio ny sosona rehetra (orana, hafanana, rivotra, sns).
Ny faritanin'i Malezia dia misy ny saikinosy Malacca, avaratry Kalimantan ary nosy kely mifanila aminy. Ny saikinosy Malacca dia manana fanamaivanana lehibe indrindra. Ny ankamaroan'ny atsinanan'i Malezia dia be tendrombohitra. Ny tandavan-tendrombohitra Crocker dia ahitana ny toerana avo indrindra - tampon'i Kinabalu (4 m avo). Ny sisin-tanin'i Malezia sy Indonezia koa dia mamaky ny faritra avo.
Mahagaga ny karazana zavamaniry sy zavamaniry eo an-toerana. Eto amin'ity firenena ity, dia afaka mahita sahabo ho 20 isan-jaton'ny karazana biby fantatra amin'ny siansa sy karazan-javamaniry tsy fahita firy ianao. Ohatra, ny rafflesia dia miteraka fiandohan'ny ala any Kalimantan - izy no voninkazo lehibe indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny savaivony hatramin'ny 1 m.
Fiteny any Malezia
Manana ny satan'ny fanjakana ny fiteny malay. Saingy fiteny maro hafa no iraisana - Anglisy, fitenim-paritra sinoa maro, sinoa, sinoa, tamoul, malayalam, Thai, singan. Mahafantatra tsara ny anglisy ny manamboninahitra polisy sy manampahefana Maleziana.
Fitaterana any Malezia
Fitaovana tsara ny fitaterana any Malaysia. Misy seranam-piaramanidina iraisam-pirenena 6 ao amin'ny firenena. Any Kuala Lumpur no lehibe indrindra amin'izy ireo. Tena mety raha mandalo any Malezia amin'ny alàlan'ny Malaysia Airlines sy Air Asia.
Ny tambajotra an-dalamby dia novolavolaina tsara indrindra ao amin'ny saikinosy Malacca. Any andrefan'ny firenena dia misy lalamby lehibe mampitohy an'i Thailand sy Singapour. Ny halavan'ny Saikinosin'i Malacca dia nita ny fiaran-dalamby "Aziatika" sy "Atsinanana". Ny halavan'ny làlan-dry zareo dia mihoatra ny 2 km. Avy any Singapaoro ka hatrany Bangkok mandalo any Kuala Lumpur izy ireo, ary maro amin'ireo gara no miorina amin'ny faritra tena kanto.
West Malaysia dia mifandray tsara amin'ny fantsona amin'ireo nosy Maleziana lehibe. Ireo seranam-piaramanidina ireo dia manome fotoana ahafahana manao dia lavitra mankany amin'ny sambo sy manidina any Lankgawi, Penang, Tioman, Kalimantan ary Pangkor.
Manerana an'i Malawi no mihodina ny làlambe North-South Expressway. Mamela anao haingana sy mora amin'ny alàlan'ny fiara na fiara fitaterana mankany amin'ny ankamaroan'ny fonenana manan-danja any andrefan'ny Malaysia. Ireo fiara fitateram-by Transnaional Express Sdn Bhd dia azo zakan'ny mpandeha avy ao Kuala Lumpur mankany amin'ny tanàna lehibe hafa any amin'ny faritra peninsular. Mandeha any Singapore ihany koa ny bus.
Vola any Malezia, fifanakalozana fifanakalozana
Ny vola any Malezia dia ny ringgit. Ny anarany lany andro indraindray dia ampiasaina - "dolara malay". 1 ringgit = 100 sen. Ny dolara malay izay nampiasaina taloha dia efa tsy nifindra intsony, saingy indraindray ny vidiny dia aseho amin'ny mari-pamantarana vidin'ity vola ity, ary amin'ny fotoana fividianana dia navadika ho vola lany.
Ary raha mivezivezy dia misy banknotes misy 1, 5, 10, 20, 50 ary 100 ringgits.
Ny kajy amin'ny dolara sy ny euro dia tsy fahita firy any Malaysia. Mba hisorohana ny olana dia tokony hanana ringgits ianao. Na amin'ny toe-javatra misy ny vidin'ny vidin'ny US dolara, mazàna ny volan'ny Malezianina ihany no ekena. Matetika koa ny dolara Singapore dia na dia eo aza ny fandoavam-bola mivantana miaraka amin'ny vola izay tsy mahasoa.
Ny fifanakalozana fifanakalozana dia atolotra hoentina amina mpivarotra mitokana, ary tsy any amin'ny banky, satria ny tahan'ny taloha dia manome salan'isa mahasoa kokoa. Any amin'ny seranam-piaramanidina, ny tahan'ny dia tsy dia mahasoa, fa io fahasamihafana io dia tsy misy dikany, tsy mitovy, ohatra, na Indonesia na Thailand.
Ity ambany ity dia mpanova vola ifanakalozana miaraka amin'ny fifanakalozana ankehitriny.
Mpanova Vola Taham-panakalozana dolara / Dolara Dolara
Ny taranja mandritra ny converter dia ilaina foana. Ary ny mpamadika dia miasa be dia be toy ny kajy calculator. Mandritra izany fotoana izany dia afaka misafidy vola izay mahaliana anao.
Ny vola mety indrindra ifanakalozana dia ny dolara amerikana. Euro, Thai baht ary Singapore dolara koa dia ekena hatraiza hatraiza ao Malezia. Saingy tsy azo atao mihitsy ny mahita exchanger izay manaiky rubles rosiana. Na izany aza, raha misy izany, dia hanodinkodinana ny Mazava ho azy, ka tsy misy antony tokony hitondrana rubles vola ho anao eto amin'ity firenena ity. Ny vola an'ny firenena hafa an'ny USSR teo aloha dia azo antoka fa tsy ekena na aiza na aiza eto.
Raha ny tokony ho izy, amin'ny kabary fitenenana, ny habt Thailand ary ny dolara Singaporeana dia matetika antsoina hoe "ringgit" ataon'ny Maleziana, ka indraindray mety hafangaro ianao.
Any Malezia, ampy ny ATM; ny fandoavam-bola ihany koa dia azo atao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny fivarotana lehibe. Na izany aza, betsaka ny banky Rosiana, Okrainiana ary banky hafa no manasokajy an'io firenena io ho mampidi-doza sy manakana ny karatra taorian'ny aotom-bola na fandaharam-panambadiana isaky ny fantsom-pifandraisana, ka izany no antony tsy maintsy ankijanona tsy tapaka.
Zavatra tokony hatao eto Malaysia
Malezia dia tsy mety amin'ny endrika fety "fety". Ny hany mampiavaka azy eto dia ny renivohitr'ity fanjakana ity. Kuala Lumpur dia manana fiainana alina velona. Amin'ity tanàna ity, amin'ny alina, be dia be ny disko, klioba, bara ahafahanao mandany ny alina manontolo.
Ho an'ireo izay tia hetsika ivelan'ny trano dia paradisa marina i Malezia. Io dia mihatra indrindra amin'ny mpitaingina sy ny surf. Ny toerana fisitrihana manintona indrindra dia ny nosy Mabul sy Sipadan.
Voarara ny manafatra sy manondrana avy any Malezia dolara mihoatra ny 1 000 isaky ny olona 1. Izay vola hafa dia avela ampidirina amina habetsany, fa ny habetsaky ny vola izay mihoatra ny 10 000 dolara amerikana dia ilaina hambara. Ny fanafarana maimaim-poana misy habetsaky ny fanahy 1 litatra, hatramin'ny 1 litatra ny divay sy / na alikaola, hatramin'ny sigara 200 na hatramin'ny sigara 50, na hatramin'ny sigara 225 g dia avela. Azonao atao koa ny mandray menaka sy zava-manitra tsy misy adidy mandritra ny 200 ringgits sy souvenir hatramin'ny 200 ringgits.